Ungaqala njani ukuthengisa kwi-Amazon kunye nezinto ezifunyenwe kakhulu?
Ukukhetha iimveliso ezifanelekileyo ukuzithengisa ngempumelelo kwi-Amazon phakathi kwezinto eziphandwayo kakhulu kubaluleke kakhulu kwimpumelelo yezo shishino kuloo ndawo. Ngokubalulekileyo, ayikho-brainer ekhethekileyo imveliso yekhethelo inquma yonke into malunga nempumelelo yoshishino phambi kwayo yonke into. Masibhekane nayo - kungakhathaliseki ukuba ulungele kakuhle kangakanani ukulungiswa nokulawula uluhlu lwemveliso yakho kwi-Amazon. Ukuba ukhethe umkhiqizo ongeyiphumelelanga ongaphumeleli ukuhlangabezana neemfuno ezinkulu zomntu onenzuzo, akunakuze kwenzeke ukuba izibonelelo zakho zifunyenwe kwizinto ze-Amazon ezifunyenwe kakhulu kwiintengiso zabathengi imihla ngemihla. Yingakho kubalulekile ukuqonda - akufanele unganqikaze ukutshala ixesha kunye nomzamo ekufuneni umgangatho ofanelekileyo oya kufunwa kakuhle kwaye uthengiswe rhoqo. Ngoko, yintoni eyenza umkhiqizo onenzuzo? Ngezantsi ndiza kukubonisa uluhlu lokukhawuleza oluchanekileyo lweengcebiso kunye neengcebiso zokufumana imveliso emihle ngokuqinisekileyo.
Ixabiso lokugqibela leMveliso (ngokwemyinge)
Okokuqala, kufuneka uthabathe ngokungenakutyala-uhla lwamaxabiso phakathi kwe-10 ukuya kuma-50 idola indawo ekhangayo e-Amazon ukuba izinto eziphandwayo zihlala zihamba apho. Ngoba? Ngenxa yokuba abathengisi bathi, abantu banokuthi bathathe iinqununu zithengi ngexesha xa bebona ithegi yexabiso eliqhelekileyo ngokukodwa kuloluhlu. Esinye isizathu sokuba ulandele imigaqo kukuba izinto ezingabizi kakhulu mhlawumbi zilula, ngokwenene ngaphandle kokuningi kubo, kunene? Emva kwakho konke, ukhetho lo mnqamlezo wexabiso eliphantsi luya kwenza isigqibo sakho esifanelekileyo sokuqala ukungena kwimarike.
Kuthathwe ngendlela ephakamileyo, ukukhetha isisindo esifanelekileyo semveliso kuyinto ebaluleke kakhulu ukubonelela ngezibonelelo zakho kwi-Amazon phakathi kwezinto eziphandwayo. Ngokwam, ndikholelwa ukuba isisindo esiphezulu esithandekayo somkhiqizo wokuthutha ukuhlahlela ngokwenene kufuneka uhlale kwindawo ethile malunga ne 1.5 ukuya ku-2.5 kilogram. Ngokwendalo ngokwemvelo kunqunywe ubungakanani obukhulu bepakethe kunye neendleko zokuhambisa ezithengiyo.
Imirhumo yeMveliso kwiCandelo elifanayo
Into enjalo, ngokuqhelekileyo, ngumsebenzi ongenakukwazi ukuwufumana ukufumana ubungakanani obuchanekileyo kwimveliso ye-BSR ), okokuqala ngaphambi kokuba uqale ukuyithengisa. Kodwa into ongayenza malunga nayo kukuqinisekisa ukuba umkhiqizo wakho omtsha unelungelo elifanelekileyo lokuthengiswa kakuhle. Ngoko ke, ndincoma ukuba ube ne-check-double check on the same categories products and their BSR scores. Ke mna, ndiza kuthatha inamba ye-BSR ye-5 000 njengomyinge wokujonga izinto ezifunyenwe kakhulu ze-Amazon kwiqela elifanayo, okanye nemveliso efanayo. Ukucima nje izinto - yinto yam yokucinga nje ndandisanda kuphuhlisa ngokusebenzisa inkqubo yokuthengisa i-ecommerce. Nangona kunjalo, njengoko ixesha libonise, isiphakamiso sisebenza.